कफी खेतीको उत्साहजनक नतिजा : आयातमा घट्यो, निर्यात बढ्यो
Monday, 11.21.2011, 04:18pm
काठमाडौं । गत बिहिबार मुलुकमा कफी दिवस मनाइयो । यो दिवसको उपलक्ष्यमा सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकले कफी उत्पादनको उत्साहजनक स्थितिलाई उजागर ग¥यो । यस वर्ष १७ प्रतिशतले कफी उत्पादन बढेको र आयातमा पनि कमी आएको बताइयो । विदेशबाट करोडौंको कफी आयात हुने प्रवृत्तिमा कमी आएको छ । यतिबेला कफी उत्पादन क्षेत्रको विस्तार भएर ४० जिल्ला पुगेको छ ।
परिसंघको ऊर्जा विकास परिषद्
Monday, 11.21.2011, 04:17pm
काठमाडौं । जलविद्युत विकासमा निजी क्षेत्रको आकर्षण बढ्न नसकिरहेको बेला नेपाल उद्योग परिसंघले ऊर्जा विकास परिषद्को स्थापना गरेको छ ।
नेताहरूको गुटबन्दी ः सैद्धान्तिक कि व्यक्तिगत ?
Monday, 11.21.2011, 04:16pm
राजनीतिक दलहरूबीच सहमतिको नयाँ नयाँ बुँदा र आधार तयार भैरहँदा दलरुभित्र मडारिंदै गएको अन्तरद्वन्द्व तथा अविश्वास झन् बढ्दो छ । यसले कायम हुने भनिएका सहमति र गर्ने भनिएको सहकार्यको बाटो नै अवरुद्ध भैरहेको स्पष्ट संकेत गर्दछ ।
राज्यको पुनःसंरचना कसरी?
Monday, 11.21.2011, 04:15pm
मुलुकको राजनीतिक भविष्य कतातिर डोरिन्छ भन्ने कुरा आम चासोको विषय छ । राज्यको पुनःसंरचनाबारेका बहसहरूले तीन वर्षको अन्तरालमा पनि कुनै ठोस गति र आकार लिएका छैनन् । मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरित गर्ने गन्तव्य निर्धारण भए पनि संघीयताको खाका कोर्ने काम बाँकी नै रहेको छ ।
कसैलाई फाइदा हुन्छ भनेकै भरमा त्यसैको पछाडि सम्पूर्ण पार्टी लाग्नुपर्छ भन्ने हुँदैन : सीपी गजुर
Monday, 11.21.2011, 04:11pm
पार्टी एक ढिक्का रहने कि नरहने भन्ने कुरा चाहिं कुनै एक पक्षमा मात्र निर्भर गर्दैन । जहाँसम्म हाम्रो पक्षको कुरा छ हामी पार्टी फुटाउन चाहँदैनौं । हामी पार्टी एकताबद्ध गराउन चाहन्छौं । त्यो एकता पार्टीले गरेको निर्णय सबैले लागू गर्नुपर्छ भन्ने शर्तमा हुन्छ । अर्को कुरा यो समाजलाई आमूल परिवर्तन गर्ने दिशामा सम्पूर्ण पार्टी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने शर्तमा हामी पार्टीलाई एकताबद्ध गराउन चाहन्छौं । कसैले कहीं कुनै प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ, कसलाई कहाँ के गर्दा फाइदा हुन्छ भनेको भरमा त्यसैको पछाडि सम्पूर्ण पार्टी एकढिक्का भएर लाग्नुपर्छ भन्ने हुँदैन ।
कर छल्नेलाई कारबाही कहिले ?
Monday, 11.14.2011, 02:51pm
आर्थिक क्षेत्रमा नक्कली भ्याट बील प्रकरणको चर्चा शिखरमा छ । झण्डै चार अर्ब रुपैयाँ बराबरको भ्याट छली भएको भन्दै सार्वजनिक भएको तथ्यांकले मुलुकमा आर्थिक अनियमितता गर्नेहरूको कालो अनुहार त सार्वजनिक भयो नै यसको अर्को पाटो पनि खुलस्त हुन पुगेको छ ।
हचुवा तालमा भएको घोषणा
Monday, 11.14.2011, 02:50pm
कुनै काम सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुभन्दा पनि त्यो काम गर्ने भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु र त्यसमा सहमति जनाउनु नै अहिलेका लागि ठूलो कुरा भएको छ । कार्तिक १५ गते भएको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउने सहमति अनुसार सरकारले मंसिर सात गतेभित्र माओवादीको कब्जामा रहेका घरजग्गा फिर्ता भैसक्नुपर्छ । तर सरकारले बिना गृहकार्य कब्जा गरिएका घर जग्गा फिर्ता गर्ने घोषणा गर्दा यसले अर्को समस्या उत्पन्न गर्ने भए पनि त्यस दिशातिर ठोस कदम चालिएको छैन ।
» सत्तामोहका अवाञ्छित कदमहरू
» आममाफी भनेको अभियोग फिर्ता नभएर सजाय भोग्न नपर्ने मात्र हो : एकराज भण्डारी– सभासद् एवं कानुनविद�
» आ–आफ्ना स्वार्थको भारी बोकेर गन्तव्यमा पुगिदैन : यादब देवकोटा
» डाइरेक्टर आफैं नाच्ने होइन, अरूलाई नचाउने हो : महेश्वर शर्मा
» राष्ट्रपतिको काँधमा बन्दुक राखेर डा. भट्टराई सरकार ढाल्ने खेल : तारा सुवेदी
» बाह्र बुँदेको मार्गचित्रमा सात बुँदे सहमति : राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ मोड
» महत्वपूर्ण अन्य पक्षको सम्बोधन गरिएन
» विकासमा खस्कदो स्थिति
» वैद्यले खडा गरेको बबाल
» जनतालाई पीडामाथि पीडा
» चिनीया टोली नेपालमा
» शान्ति र संविधानका ठेकेदारहरूलाई प्रश्न
» जनस्वास्थमा खेलबाड
» शान्ति भन्ने कुरा किस्तामा हुने होइन- उपेन्द्र यादव, अध्यक्ष मधेशी जनअधिकार फोरम
» अग्रगामी संविधान लेखनमा सभासद्हरूको भूमिका : यादब देवकोटा
» उपदेश होइन, उदाहरण बनेर देखाऊ : महेश्वर शर्मा
» संविधान सभाले असंवैधानिकभन्दा वैधानिक बाटो रोज्नुपर्छ : तारा सुवेदी
Page 102/107: « :: ... 99 100 101 102 103 104 105 ... :: »